Isi ihe kpatara ị ga-eji gaa Austria - Gịnị ka ọ na-enye anyị? | Njem zuru oke
Austria bụ mba Europe ndị isi obodo ha bụ Vienna. Ọ na-agbakwụnye na ụdị njem ndị ahụ na-adaba n'ịhụnanya, ọbụlagodi na ịchọghị. Otu n'ime obodo kachasị atụ anya bụ Salzburg, nke ga-ejide anyị na Hohensalzburg Ebe ewusiri ike, ya na katidral ya na ọbụnadị n'okporo ámá ya a ma ama, Getreidegasse.
Obodo ọzọ ga-eju gị anya bụ Innsbruck, nke ugwu ugwu gbara ya gburugburu. Ihe yiri ya, ọ bụ ezie na ọdọ mmiri gụnyere, bụ ihe anyị ga-ahụ na Hallstatt, nke a na-ahụta ka otu n'ime obodo mara mma. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ọma mara, ma na nnukwu ihe ncheta na echiche bụ Graz.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka Vienna mgbe ahụ anyị ga-eme ụfọdụ karịa nkwụsị dị mkpa. Ma na Schonbrunn Obí na ya mba n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ na Ringstrasse Okporo ụzọ, ebe ọ bụ na nke a adịghị eduga na ihe ndị kasị mkpa ncheta nke ebe. Obí eze Belvedere ma ọ bụ Stadtpark na Katidral St. Stephen bụ isi ihe ndị ọzọ.
Linz bụ obodo ọzọ dị n'akụkụ mmiri nke Danube anyị ga-agarịrị. N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkụ nzọ na egwuregwu na n'etiti ha, ịgba ọsọ, mgbe ahụ ị ga-aga St Anton am Arlberg na Austria.
Schnitzel, nri ndị Austria na -ewekarị
Na njem ọ bụla ị ga-aga Austria, ị ga-edokwa otu ụbọchị na tebụl n'ụlọ oriri na ọ traditionalụ traditionalụ ọdịnala iji nye gị ihe ọma ...
Otu ụzọ kachasị mma iji gaa isi obodo Austria ma chọpụta akụkụ ya kachasị atọ ụtọ bụ iji ...
Obi abụọ adịghị ya na isi obodo Austria bụ otu n'ime obodo kachasị maa mma ma maa mma na Europe. Niile na…
Ọ bụrụ na ị nwere njem na-echere, n'oge na-adịghị anya na nke a bụ ebe ị na-aga, ị ga-eche n'ezie ihe ị ga-ahụ ...
Ihe ịga leta na Vienna
N'akụkụ mmiri nke Danube anyị hụrụ obodo a mara mma. Isi obodo Austria anọrọghị na mbịambịa gị ...
Nwee ememme Lantern ndị China na Vienna
por Ezigbo Austria eme 5 afọ .
Izu gara aga, kpọmkwem na Tọzdee, Septemba 1, ihe ngosi dị egwu akpọrọ China Magic… mepere ụzọ ya na Vienna.
Flag nke Austria, ihe kpatara agba ya
Akụkọ banyere Austria amaliteghị usoro ndị Habsburg ma ọ bụ kwụsị na ya, n'agbanyeghị afọ ndị ...
Vienna, n’agbata narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX
Ọ bụrụ na anyị ga-eme ihe mgbe anyị nọ na Vienna, ọ bụ ịchọpụta obodo n'ụkwụ. Enwere ọtụtụ ụzọ enwere ike, ọtụtụ njem ndị njem, ...
Eze ikpeazu nke alaeze Austro-Hungaria
E nwere oge Austria bụ isi nke otu nnukwu ala-eze nke mechara tisasịa mgbe ọgwụgwụ ...
Isi n'ọnụ na Austria, ọrụ ma ọ bụ nhọrọ
Etiquet na-achịkwa akparamàgwà nke ọtụtụ mmadụ. Yabụ, dịka omenaala anyị si dị, anyị ga-adị ma ọ bụ pere mpe ...
A ije site na labyrinth nke Schonbrunn Obí
Otu n'ime ihe a na-ahụ na Vienna bụ Schonbrunn Obí mara mma ma dị mma. Nleta na-adị mma mgbe niile na ...
Uwe ejiji Austrian